Thursday, 04.09.2020, 12:56pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 11.27.2019, 10:53am
Wednesday, 10.02.2019, 05:11pm
Thursday, 04.04.2019, 01:31pm
नेपालका नेताहरुले पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको अवस्थालाई स्वीजरल्याण्डको जस्तो बनाउने घोषणा र दावा गरेका थिए । हुन पनि भौगोलिक हिसावबाट उस्तै लाग्ने दुई भिन्न ध्रुवका नेपाल र स्वीजरल्याण्डबीच गहिरो मित्रता पनि छ र नेपाललाई उसले पर्याप्त सहयोग गर्दैआएको छ । यस्तोमा नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डकी राजदूत एलिसाबेथ भोन क्यापेलरसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ । प्रस्तुत अन्तरवार्ता अनलाइन खबरबाट साभार गरिएको हो ।
Thursday, 03.28.2019, 11:05am
मेगाटेक हाइड्रो एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. का कार्यकारी अध्यक्ष, इन्जिनियरिङ्ग कलेजका पूर्व संस्थापक एवं प्रिन्सिपल र नेपाल इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को सदस्य रहनु भएका श्रीराम न्यौपाने हाल सुरुङ्ग निर्माण विषयमा विद्यावारिधी गर्दै हुनुहुन्छ । विकासका अनगिन्ती मोडल साँचेर राख्नु भएका उहाँसँगसूर्य प्रसाद कोइरालाले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ-
Tuesday, 12.11.2018, 01:28pm
मलाई धेरै साथीहरुले धेरै प्रश्न पनि गरे । जिल्लाहरुबाट पनि पदाधिकारी संख्या किन बढाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेर सोधे । यसमा मेरो कुरा ‘क्लियर’ छ । कांग्रेसले निर्वाचनका बेला आफ्ना सबै संयन्त्रलाई पूर्णरुपमा सञ्चालन गर्न सकेन, अनुशासित रुपमा परिचालन गर्न सकेन । समाजमा निरन्तररुपमा खट्नुपर्ने कार्यकर्तालाई खटाउन सकेनौं । पार्टी संगठनमा कहाँ, के कमी भयो हेरविचार गर्न सकेनौं । भ्रातृ संगठनहरु के गरिरहेका छन्, के समस्या छ भन्ने हेरेनौं । कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्न सकेनौं । मैले देखेको समस्या हुन् यी । अब एउटा उपसभापतिले प्रशिक्षण विभाग चलाउनुस्, अर्कोले अनुशासन र अर्कोले सामाजिक परिचालन हेर्नुस् । महामन्त्री पनि तीनजना राखौं । एउटाले संगठन हेर्नुस्, अर्कोले भ्रातृ संगठन हेर्नुस्, अर्कोले अहिलेको राजनीति कता गएको छ, अरु दल के गर्दैछन् विश्लेषण गर्नुस् ।
साँझ ९ बजेतिर पुलिस आएर होटल बन्द गर, सुरक्षा दिन सक्दैनौं भने । मैले पछि आईजीपी र गृहमन्त्रीलाई भनें कि उनीहरु आफ्नो देशमा सुत्न नपाएर आएका हुन् र ? रातभर खुला रहन दिएको भए उनले ९–१० बोतल बियर खान्थे, रमाइलो गर्थे । होटलमा पनि तीन सिफ्टमा मजदुरले काम पाउँथे । अनि सुरक्षा भनेको के ? ठमेल, पोखरा र सौराह रातभर खुला गरे हुँदैन ? सौराह रातभर खोल्नुपर्छ भनेर त अर्थशास्त्रको किताबमा लेखेको छैन र हुँदैन पनि । यो बिजनेश हो । र, यो तपाईको दिमागबाट आउने हो ।
Tuesday, 10.02.2018, 12:31pm
विरोध केका लागि ? संयुक्त राष्ट्र संघमा स्तरीय ढङ्गले स्पष्टताका साथ आफ्नो कुरा राखिँदा, नेपाली जनताका कुरा दुनियाँलाई बताउँदा, नेपाल उन्नति र विकासको बाटामा जान चाहेको छ भन्ने कुरा जानकारी दिन लाग्दा, नेपालको प्रतिष्ठा माथि उठाउँदा विरोध हुँदैन । नेपालमा बहुमतको स्थिर सरकार बन्यो वा स्थायी सरकार आयो भने नेपालले भ्रष्टाचार रोक्छु, सुशासन दिन्छु, अब आर्थिक उन्नतितर्फ ध्यान दिन्छु भन्यो भने विरोध हुँदैन । हारियो भनी आफैँलाई नोक्सान गर्ने विरोधको अर्थ हुँदैन । विरोधको आधार चाहिन्छ, आलोचना आधारयुक्त हुनुपर्छ, सुझाव र टिप्पणी आधारयुक्त हुनुपर्छ । विरोध मन पराउनुपर्ने कारण छैन र विरोधसँग हच्किएको पनि हैन । निराधार, अर्थहीन, अनावश्यक, अनुचित विरोध गर्ने आफँै एक्लिने कुरा हुन्छ र जनताले बुझ्छ । जनतालाई मूर्ख बनाउँछु भन्दा जनताले बुझ्छन् । आफ्नै मर्यादाका लागि उपयुक्त ढङ्गको व्यवहार सबैलाई उचित हुन्छ ।
Tuesday, 09.25.2018, 12:17pm
Tuesday, 05.08.2018, 11:01am
Tuesday, 04.24.2018, 01:17pm
को कस्ता हौं भन्ने हामी सबैले देखेकै छौं । हाम्रा राम्रा नराम्रा सबै ट्रयाक रेकर्ड मुलुकले देखेकै छ । इतिहासमा हाम्रा सबल र दुर्बल पक्ष के हुन् । उहाँजस्ता नेतालाई दुनियाँले बुझेकै छ । त्यसैले स्टेपका कुरा नगरौं । जनताले अग्रभागमा रहेका नेता को कस्ता भनेर चिनिसकेका छन् ।
Tuesday, 04.03.2018, 01:39pm
Tuesday, 02.20.2018, 10:55am
हामीले गत साल विद्युत चोरी र चुहावटलाई २६ प्रतिशतबाट २३ प्रतिशतको हाराहारीमा झा¥यौं । यसपालि २० प्रतिशतमा झार्ने भनेका छौं । डेढ वर्षमा ५ प्रतिशत झार्ने भनेको ठूलो उपलब्धि हो । यसबाट विद्युत प्राधिकरणलाई ५ अर्ब रुपैयाँ त त्यहीँबाट निस्कन्छ । हामी योभन्दा अझै ५–१० प्रतिशत झार्न सक्छौं । अहिले त्यो क्याम्पेन चलिराखेको छ । किनकि यहाँ १०–१२ अर्ब रुपैयाँ अप्राविधिक रुपबाटै घाटा भइरहेको छ । टेक्निकल कारणले हुने घाटा पनि अन्य मुलुकहरुमा १० प्रतिशत भन्दा कम हुन्छ, हाम्रोमा त्यसो गर्न गाह्रो छ । किनभने त्यसका लागि पैसा पनि चाहिन्छ, टाइम पनि चाहिन्छ । ट्रान्सफरमरहरु फेर्नुपर्छ, कन्डक्टर फेर्नुपर्छ । सबै कुरा चेञ्ज गर्नुपर्छ । तर, नन टेक्निकल घाटा भनेको त सबै चोरी नै हो । यसलाई १५ प्रतिशतमा झार्नलाई त्यति समस्या हुनुहुँदैन ।
Tuesday, 01.30.2018, 02:49pm
अहिले केपी ओलीजीले बनाएको जुन व्यक्तित्व छ, राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, भलै म त्यसलाई कोट अनकोटमा राष्ट्रवाद भन्छु । भोलि त्यो इमेजलाई लत्याएर अर्को एंगलमा उनी गए भने उनको लोकप्रियता पूरै डाउन हुन्छ । साबिककै अडान लिएर जान्छु भन्ने हो भने पनि धेरै अघि जान दिँदैनन् ।उहाँलाई अहिले जुन फोन कलहरु आइरहेका छन्, (नरेन्द्र मोदीबाट) ‘टु सम एक्सटेन्ट’ तपाईलाई हामी वेलकम गर्छौ, मिलेर कार्न तयार छौं भनेको हो ।
Tuesday, 12.19.2017, 01:09pm
Wednesday, 11.15.2017, 02:02pm
पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको शनिवार निधन भएको छ । देशप्रेमी प्रधानमन्त्रीका रुपमा विष्टको ख्याती थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले रुचाएका प्रधानमन्त्रीमा किर्तिनिधि बिष्ट एक नम्बरमा आउँथे । ०२६ सालमा चीनसँग जोडिएको उत्तरी सीमानाबाट भारतीय चेकपोष्ट हटाएर भारतले नरुचाएका प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिएका बिष्टलाई नैतिकवान प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि लिइन्छ ।
Wednesday, 10.11.2017, 01:51pm
नेपालमा नयाँ शक्तिको ऐतिहासिक आवश्यकता छ । वैकल्पिक राजनीतिको विश्वव्यापी ट्रेन्ड पनि देखा परेको छ । त्यसैले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको हाम्रो लक्ष्य छ, त्यसमा हामी अहिले पनि दृढ छौं । तर, लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो समयअनुकुल फेरबदल हुन्छ । एउटै बाटोबाट मात्र लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने छैन । त्यसैले अहिले हामीले बाटो थोरै मोडेकै हो । अर्को, तत्काल हामीले के पनि देख्यौं भने नेपालमा जुन राजनीतिक अस्थिरता छ, पटकपटकको सरकार परिवर्तनले विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा हुन सकेको छैन । त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दै विचार मिल्ने वाम, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, देशभक्त शक्तिहरुको बीचमा तालमेल गरेर जान सकियो भने स्थिर सरकार बन्छ ।
» माओवादीसंग मिलेर एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो ?
» निर्वाचन आयोग अहिले आइसीयुमा छ
» म आपराधिक प्रवृत्ति, षड्यन्त्रकारी र आत्मसमर्पणवादीको घेराभित्र थिएँ
» फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने आशंका बढ्दैछ : कुलमान घिसिङ
» सुखको खोजीमा मात्र हिंड्यो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ
» पार्टी खोलेर मात्रै हुँदैन एजेण्डा पनि सही हुनुप¥यो– अनिता यादव
» सबै ठीकठाक भए ८० दिनमा चुनाव गरिन्छ
» नेपाल शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्ने रणनैतिक मैदान बनेको छ : पेशलकुमार निरौला
» सबै भन्छन्– पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण तर सम्मान खै ?
» असफलता ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा हालेर सत्ता जोगाउने प्रपञ्च भैरहेको छ : नेत्रविक्रम चन्द
» अहिले देश अति नै दुखेको अबस्थामा छ- पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट
» केही गरौं भन्ने भावना राज्य तहकामाभन्दा सामान्य श्रमिकममा बढी हुन्छ
» संशोधन मार्फत कसलाई के अधिकार दिन खोजेको हो ?- भीम रावल
» क्युवाली नेता फिडेल कास्ट्रोको अन्त्येष्टी
» लोडसेडिङको अन्त्य चर्चाका लागि मात्रै हैन- ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा
» अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पद दिने माग मधेशी जनता हैन
» काश्मिरमा आक्रमण १७ सैनिकको मृत्यु
» "ओलीको राष्ट्रवाद अपूर्ण भए पनि ढोंगी भन्नु गलत" - पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत
» “भन्सार पहिलाको भन्सार रहेन, अब त्यहाँ कुनै आकर्षण छैन”
» नेपालको गति नै रोकिने अवस्था अहिले आएको छ - नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे